Posted by: chhepyastra weekly | नोभेम्बर 19, 2011
अहिलेकै प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने हो भने जनताको संविधान बन्न सक्दैन
हरिभक्त कडेल ‘प्रतिक’, पोलिटब्युरो सदस्य- एनेकपा माओवादी
० सात बुदे सहमतिको तपाईंहरूले विरोध गरिरहनुभएको थियो तर सरकार त कार्यान्वयनमा गएको छ नि, तपाईंहरू के गर्नुहुन्छ अब ?
हामी अहिले छलफलको क्रममा छौ । हामीले सात बुादे सहमतिको औपचारिक रूपमा नै विरोध जनाएका छौ । सात बुादे सहमतिलगायत अन्य विषयमा छलफल गर्न केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन आग्रह गर्यौ । सत्य कुरा अहिले भर्खरै पुष्टि भएन भने पनि पुष्टि हुादै जान्छ । पार्टीलाई झुक्याएर पार्टी पद्धति बाहिरबाट हुने कुराहरूले न स्थायी विचार र राजनीतिको नेतृत्व यसले गर्न सक्छ न यसले स्थायी शान्ति र संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन सक्छ ।
० तपाईंहरूले वक्तव्य जारी गरेर जनमुक्ति सेनालाई समायोजनको प्रक्रियामा नजान अपिल गर्नुभएको छ, यसले त समायोजनमा जान चाहने र नचाहनेबीच द्वन्द्व सिर्जनजा गर्दैन र ?
हामीले सेना समायोजनको विरोध गरेका छैनौ । तर समायोजन सम्मानजनक रूपमा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । जनयुद्ध गरेर आएका जनताका सपुतहरू सम्माजनक ढङ्गले जनुसुकै प्रक्रयामा गए पनि हामी आपत्ति रहने कुरा हुादैन । शान्तिप्रक्रियाको महत्वपूर्ण मुद्दा सेना समायोजनको प्रक्रिया राम्रोसाग अगाडि बढ्यो भने त्यो सबैको लागि स्वीकार्य हुन्छ । विरोध गर्ने कुरा बाटाहरू हुनुहुदैन । शान्तिप्रक्रियाको अर्को महत्वपूर्ण पाटो संविधान निर्माण हो । संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई थाती राखेर सेना समायोजनको प्रक्रियालाई मात्र समात्ने जुन कोसिस भइरहेको छ, यो आपत्तिजनक छ । हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले संविधान निर्माण र सेना समायोजनको कामसागसागै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसलाई लत्याएर केही नेताहरू अगाडि बढेपछि त्यो गलत छ भन्दै हामीले विरोध गर्यौ । अहिले त्यो पुष्टि हुन खोजिराखेको छ । पार्टीमा सहमति नभएसम्म प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्न सक्दैन, जबर्जस्ती अगाडि बढाउनाले ठूलो दुर्घटना निम्तिन पनि सक्छ । हामीले जनसेनालाई छुट्टै फोर्सको रूपमा मान्यता दिनुपर्छ भन्दै आएका छौ । जनमुक्ति सेनालाई सीमा सुरक्षा बलको जिम्मा दिनुपर्छ । अहिले जनमुक्ति सेनालाई जुन प्रक्रियामा अगाडि लैजान खोजिादैछ, त्यसले निशस्त्रीकरण, आत्मग्लानीतर्फ लगिराखेको छ । जनसेनालाई समायोजनमा जाने वा स्वेच्छिक अवकाशमा जाने उहााहरूको कुरा हो, हामीले हाम्रो विचार समूहबाट जनसेनाका साथीहरूलाई जुन अपिल गर्यौ, त्यो सही छ वैज्ञानिक छ ।
० पार्टीभित्रको विवाद केन्द्रीय समिति बैठकबाट समाधान गर्नुपर्नेमा बैठक पटक-पटक सरेको छ, यसको कारण के होला ?
केन्द्रीय समिति बैठकबाट सबै कुराहरू टुङ्गो लगाउनुपर्ने हो । कतिपय पारित भइसकेका कुराहरूसमेत कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तयार नभई सेना समायोजन गरियो भने, त्यो राष्ट्रिय सेना बन्न सक्दैन । केन्द्रीय समितिमार्फत् टुङ्गो लगाएर प्रक्रिया अगाडि बढाइनुपथ्र्यो । तर नेतृत्वले केन्द्रीय समितिको बैठकमा टुङ्गो नलगाई हतारमा जुन काम अगाडि बढाएको छ, त्यो नै गलत छ ।
० पार्टी संस्थापन पक्षले तपाईंहरूलाई पार्टी छाडेर जान भनिरहेको छ, एकतर्फीरूपमा आˆना निर्णयहरू लागू गरिरहेको छ, के तपाईंहरू पार्टीभित्र कमजोर देखिनुभएको हो ?
पार्टीको आधिकारिक निर्णय र मान्यतालाई जसले बोकेर अगाडि बढ्छ, त्यो नै संस्थापन पक्ष हो । पार्टी संस्थापन पक्षका पदाधिकारीहरूको पदले निर्धारण गर्ने कुरा होइन । यी भ्रम हट्न जरुरी छ । केन्द्रीय समितिका निर्णयहरू उल्लंघन नगर्नुस् भनेर प्रचण्ड, बाबुरामलाई हामीले बारम्बार आग्रह गर्यौा, निर्णय उल्लंघन नगर्नको लागि अपिल पनि गर्यौ। हामीले पटक-पटक केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउन आग्रह गर्यौ । हामीले केन्द्रीय समितिले गरेका निर्णयहरूको परिधिमा रहेर आˆना गतिविधिहरू अगाडि बढाइसकेका छौ । अध्यक्ष मात्र यो पार्टीको ठेकेदार होइन, त्यो ठेक्कापट्टाको लागि उहाालाई अध्यक्ष बनाइदिएको होइन । यो पार्टीको माया अध्यक्षलाई जति छ, त्यति नै माया पार्टीका अन्य सदस्यलाई पनि छ । पार्टीको विचार, आधिकारिक मूल्य, मान्यताबाट जो विचलित हुन्छ, त्यो नै पार्टीबाट अलग भएको ठहर छ । त्यसरी भन्ने हो भने नेतृत्वपंक्ति पार्टीबाट च्यूत हुन खोजिरहेको प्रमाणित हुन्छ । हामीले हिजो गरेका प्रबिद्धताबाट भाग्ने अधिकार कसैलाई छैन, त्यो प्रतिबद्धता पूरा गर्न सबै जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइरहेको छ । पार्टी निर्णयविपरीत गएर कसैलाई धम्क्याउने या कसैलाई न्यूनीकरण गर्ने यो विचारको प्रश्नमा त्यो पक्ष कमजोर भएको छ भन्ने हामीलाई लाग्छ ।
० केन्द्रीय समितिमा तपाईंहरूको समूहको बाहुल्यता कम छ, त्यही कारण केन्द्रीय समिति बैठक सार्नमा तपाईंहरूको हात रहेको छ भन्ने अध्यक्ष पक्षको आरोप रहेको छ नि ?
यो वाहियात कुरा हो । हामी विचार र राजनीतिमा यतिबेला बहसमा उत्रिएका छौ । हाम्रा कतिपय कार्यदिशा मै भिन्नता त होइन भन्ने प्रशन उठेको छ । शीर्षस्थ नेतृत्वले शृंखलाबद्ध गल्ती गरिरहने, फेरि केन्द्रीय समिति बैठक बस्न पनि तीव्रता र तत्परता नदेखाउने । कहिले के, कहिले के भनेर जुन टार्ने काम भएको छ, यो सही छैन । हामीले छिटोभन्दा छिटो बैठक बस्नुपर्यो भनिरहेका छौा । हामीले यस्तो भनेको झण्डै तीन महिना भइसक्यो । भर्खरै-भर्खरै मात्र बैठक सुरु भएको छ, त्यसकारण यो भनाइमा कुनै तुक छैन । बरु ‘जो चोर उसैको ठूलो स्वर’ हुन खोजेको त होइन भन्ने देखाउाछ ।
० सरकारको कार्यशैलीलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
पार्टीको आधिकारिक मूल्य, मान्यताबाट यो सरकार चलेको छैन । पार्टीले सरकार चलाउने वा सरकारले पार्टी चलाउने हो अवस्था बुझ्न सकिएको छैन । सरकारमा हाम्रो पार्टी मात्र छैन, अन्य दलहरू पनि छन् तर पनि मुख्य कुरा के हो हामी जनयुद्ध र जनआन्दोलनले शंखघोष गरेका एजेन्डाहरूभन्दा पर गएर कुनै पनि निर्णय लिन सक्दैनौ। यो सरकार जुन चार बुादे सहमति भएर बन्यो, त्यसको त्यो आधार नै गलत छ, त्यसकारण यो सरकारले गल्ती गर्दै जानु त अनिवार्य छ । गल्ती गर्दै जाादा त्यो सरकार फसदै पनि गइरहेको छ । हामीले सरकारलाई गल्ती सच्याएर अगाडि बढ्न भनिरहेका छौा । सरकारले विभिन्न राष्टघाती सम्झौता गर्दै अगाडि बढेको छ । त्यसखालका सम्झौता गरेर कसलाई खुसी पार्न खोजिएको हो ? प्रश्न उठेको छ । बिप्पा जस्तो घातक सम्झौता १९५० जस्तो असमान सन्धि बन्न पुगेको छ । प्रतिस्पर्धा त्यो देशसाग हुनसक्छ, जसको आर्थिक आधार र क्षमता त्यसले राख्छ । सरकारले अहिले संसद्मा ल्याएको संविधान संशोधनको विधेयक हामीले पारित हुनबाट रोक्यौा । जसले गर्दा विधेयक फिर्ता हुने सम्भावना बढेर गएको छ । त्यसकारण हतारो गरी बिना सुझबुझ सरकार अगाडि बढ्छ भने ऊ फस्दै जाने निश्चित छ । मन्त्रिमण्डल ठूलो आकारको बनाएर सरकार टिकाउने ध्येय मात्र राखेर गरिने क्रियाकलापले जसरी विगतमा सरकारहरू फसदै अलोकपि्रय बन्दै गए, अहिलेको सरकार पनि काम कुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिमितिरजस्तो गरी अगाडि बढ्न खोज्दैछ ।
० संविधानसभाको म्याद सकिादै गर्दा प्रधानमन्त्रीले छ महिना म्याद थप्ने कुरा बाहिर ल्याएका छन्, तपाईंहरू संविधानसभाको म्याद थप्नेतर्फ लाग्नु हुन्छ या कुनै विकल्प सोच्नु भएको छ ?
अहिले कै प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने हो भने जनताको संविधान बन्न सक्दैन । संविधानसभाको औचित्य पनि क्रमशः खत्तम हुादै गएको देखिन्छ । बाहिरको एउटा घेराभित्रकै अवसरवादीहरू, सुधारवादी, प्रतिगमनकारहिरूको घेरा रहेको छ । मुख्य गरी यथास्थितिवादहिरूले जनताको अग्रगमनकारी संविधान बनाउने काममा अवरोध सिर्जना गर्न खोजिदैछन् । जनताको संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण आजको अनिवार्य आवश्यकता हो । सम्झौताको अगाडि बढ्ने बाटो खुला नगर्ने बन्द गर्ने काम गर्न हुादैन । अगाडि बढ्ने बाटो रोक्ने गरी सम्झौता गरियो भने संविधानसभाको म्याद थप्नेको औचित्य रहादैन ।
हामी यतिबेला संवेदनशील अवस्थामा छौ । यो यतिहासको ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ हा । जनयुद्धको क्रममा हजारौा वीर सपुतको साहदत भयो, हजारौ बेपत्ता भए भने कति घाइते अवस्थामा छन्, उनीहरूको सपना पूरा हुने गर अिगाडि बढ्नको विकल्प छैन । जनताको संविधान लेख्नको लागि जनताबाट एक खाले दबाब सिर्जना हुन जरुर छि । त्यसको लागि म सम्पूर्ण जनसमुदायलाई सजग रहन अपिल गर्दछु ।